Xeerarka iyo dhaqanka - Xaaladda degdega ah ee Coronavirus
Dowlada talyaaniga si eey u xakameyso faafida curukaan cusub ee Coronavirus (COVID-19) waxey soo rogtay shuruucyo badan oo eey qasab tahay in la tixgaliyo , hadii kale lagala kulmi karo ganaax ama xarig.
19-Mar-2020 2 April 2020
CORANAVIRUS: SHURUUDAHA BANAANKA LOGU BIXI LARO
MA MAKU DHEX SAFRI KARA WADANKA TALYANIGA?
Maya, guriga lagama bixi karo sabab la an, bandowga waxa uu saaran yahay dhaman wadanka. Xasuusnow hadi aad isku aragto calamadaha qaar la xiriir dhaqtarkaga
WAAA KUWEE SABABAHA LOGA BIX KARO GURIGA?
Waad uga bixi kartaa guriga oo aad shaqo u tagi kartaa, sababo caafimaad awgood ama xaalado baahi darteed. Si loo caddeeyo baahiyahaas, is-caddeynta waa in la buuxiyaa kaas oo sidoo kale toos looga dhigi karo foomamka booliiska loo soo gudbiyey. Xaqiiqda caddaynta ayaa lagu xiri doonaa jeegag dambe.
Qof kasta oo ka maqnaada guriga, guri ama deggene ma ku soo noqon karaa guriga?
Haa, waa la fahmay ka dib inaad u gudbi karto oo keliya baahiyaha shaqada, xaaladaha daruuriga iyo sababaha caafimaadka.
Haddii aan deganaado degmo oo aan ka shaqeeyo degmo kale, ma u noqon karaa hore iyo gadaal?
Haa, haddii ay tahay isbeddel lagu sababeeyey baahiyo ganacsi.
MA ISTICMAALI KARAA ADEEGA GAADIIDKA BULSHADA?
Haa, ila iyo hada lama xirin
MALA OGOLYAHAY IN LASOO ADEGTO CUNO IYO ADEEGA DARUURIGA AH?
Haa, oo looma baahna in la qabto maxaa yeelay bakhaarradu had iyo jeer waa la keenayaa. Wax xaddid ah ma lahan soo wareejinta badeecada: alaabada oo dhan, markaa ma aha oo kaliya kuwa daruuriga ah, waxay ku wareegi karaan dhulka dalka.
MALA OGOLYAHAY ADEEG KA BAXSAN CUNO?
Haa, laakiin keliya haddii ay jirto baahi aad u adag, markaa waa keliya iibsashada alaabada la xiriirta baahiyaha aasaasiga ah ee aan dib loo dhigi karin.
MA AADI KARA ASXAAB AMA EHEL SI AN ULASO CUNTEEYO?
MA AADI KARA SI AN U SAACIDO QOF WAYEEL AH AMA CUURYAN AH?
Haa, laakiin xusuusnow inay waayeelku yihiin dadka ugu nugul sidaas darteedna isku day inaad ka ilaaliso inta ugu macquulsan xiriirada.
Dhaqdhaqaaqa muruq ma loo oggol yahay dibadda?
EEYGA BANAANKA MA U WADAN KARA?
Haa, maareynta maalinlaha ah ee baahideeda jir ahaaneed iyo baaritaannada caafimaadka xoolaha.
MAXAA KU DHACAYA QOFKI ANAN TIX GALIN SHURUUCDA KORE?
19-Mar-2020 30 March 2020
Si aad uga baxeo gurigada wa qasab in aad qadata warqadan oo eey wasarada arimaha gudaha soo dirtay, waa in aad buux buuxisa dhaman melaha banaan.
[Halkan guji si aad u soo dejiso foomka cusub 03/26/2020]
Wa tan sida ad u buux buuxin karto: